Ngabe Ezokuxhumana Ziphoqa Abathengisi Kude neMass Media? | Martech Zone
NgoLwesine, Februwari 16, 2017 Douglas Karr
Le infographic emnandi evela ku-Sprout Social enemiphumela ejulile kunabakhangisi abangavuma ukuyamukela. I-infographic ibizwa ngokuthi Izitayela ezi-6 Zezenhlalo Ezizothatha 2017 futhi uhamba ngesiteshi ngasinye semidiya yezenhlalo, ukuthi ukuziphatha kwabathengi kushintsha kanjani, kanye nokuthuthuka kobuchwepheshe obunjengobuhlakani bokuzenzela.
Kuhlanganiswe nevidiyo efunwayo, ubuchwepheshe obuvimbela izikhangiso, nokukhula kweziteshi eziyi-1: 1 ezifana ne-Snapchat nabakhangisi kudingeka bacabangele kabusha ukukhangisa kwabo kwe-batch nokuqhuma okubandakanyeka unyaka nonyaka. Umthengi unamandla manje okuthola abakudingayo, lapho bekudinga, lapho akudinga khona, ngentengo ayifunayo. Izinketho ezincane zezinkampani zikhomba ukutshala imali kulwazi lwamakhasimende abo nokwakha ubudlelwano ngqo.
Ngisho nasebudlelwaneni bezebhizinisi nezebhizinisi, ukumaketha okusekelwe ku-akhawunti ushayela imiphumela. Ngenkathi ukukhangisa okubanzi kungafanga, kuhloswe, amasu enziwe ngezifiso aqala ukuhambisa uhambo lwamakhasimende - hhayi izikhangiso ezifakiwe kumaphi lapho zingaboni khona.
Imikhuba Yezokuxhumana Komphakathi 2017
Ama-AI Ama-Facebook ne-Instagram - Okunye ukufana kwe- okuhlangenwe nakho okubonakalayo kokubikezela kungenzeka ukuthi isendaweni emfushane ye-Facebook, kepha anginasiqiniseko sokuthi izinja ze-AI zizodedelwa kuleli qophelo kuhambo lwethu lwezokuxhumana. Ngisola ukuthi ukusetshenziswa kokuqala kuzoba ukufanisa izikhangiso nezinto ezithandwayo.
Ama-Chatbots amaningi Wesevisi Yamakhasimende - ngenkathi isidingo sobudlelwano obuqondene nomuntu kanye no-1: 1 sizokhula, ngokubonga kukhona ubuchwepheshe obuzosiza ukunciphisa izinsizakusebenza ezidingekayo ukuthola imiphumela ephezulu. Ama-Chatbots angasetshenziselwa ukuhlinzeka ngemininingwane eningiliziwe engxoxweni engacimi abathengi noma amabhizinisi - konke ngenkathi kukhuphula amazinga wokuguqulwa nokusiza izivakashi.
Okuqukethwe okukhokhelwayo kuyaqhubeka nokubusa - Uma kukhona into eyodwa abathengisi abayiqondayo ukuthi imithombo yezokuxhumana yakha ibhuloho phakathi kwemikhiqizo nezinsizakalo zakho nabathengi noma amabhizinisi ofuna ukubathola phambi kwawo. Njengoba izinkundla zokuxhumana zikhula kakhulu, uyazi ukuthi lelo bhuloho lizobiza kakhulu!
Okusemqoka kuzici zebhizinisi nezibalo - Angiqiniseki ukuthi izici kunembile - Ngikholwa ukuthi izinzuzo, inani, kanye nesipiliyoni kulapho imithombo yezokuxhumana izothuthukisa ukuzibandakanya, ukutholwa, ukugcinwa, nokwenyusa inani lobudlelwano bethu namakhasimende ethu. Izibalo zibalulekile kulokhu - kepha ngingahle ngikhethe okuhlangenwe nakho okulula okubandakanya ukwengeza inqwaba yezici ezingaqondakali.
Susa kude ne-Automation - Nami ngingumuntu othanda ukungabaza ngalokhu. Ku-2017, abathengisi bazodinga yonke into ezenzakalelayo abangayisingatha ukufeza imiphumela ephezulu ngezinsizakusebenza ezincane. Kodwa-ke, ngizophikisa ngokuthi kufanele kube amathuluzi ayinkimbinkimbi alalelayo, ahlukanise, enze ngezifiso, futhi abikezele ukubandakanyeka okulandelayo ku-inthanethi ngemithombo yezokuxhumana.
Ukuthengwa Komphakathi Nokuthengwa Okusheshayo - Kanye nekhono lokuthenga kalula, ukunikela, noma ukuthumela izipho, ukusebenzisa okuqukethwe okwenziwe ngumsebenzisi kuzoba umkhuba okhulayo. Sizokwabelana ngokuthunyelwe mayelana Stackla kungekudala lokho kuyamangaza impela, kukhuphula amazinga wokuguqulwa kwesinye isikhathi ama-30% kweminye imikhiqizo.
Akungabazeki ukuthi ukukhula nokuthuthuka kwezokuxhumana kuzoba khona ngonyaka we-2017. Ngenkathi amabhizinisi eqhubeka nokulwa - ama-34% kuphela amabhizinisi amancane asebenzisa imithombo yezokuxhumana ukuzibandakanya nokuxoxa namakhasimende, cishe ingxenye eyodwa kwezintathu yabo bonke abathengi ithe ubukhona bezimpawu zomphakathi isizathu esikhulu sokuzama imikhiqizo emisha noma izinsizakalo. Futhi abathengi abangama-57% maningi amathuba okuthi bathenge kulo mkhiqizo abawulandelayo
Tags: 2017 izitayelainfographicimikhankaso yomphakathiokulandelayo kwezenhlaloezokuxhum ezishintshayoimithombo yezokuxhumana infographicizitayela zokuxhumana nabantuizitayela zokuxhumana nabantu 2017ukuba khona emphakathiniukuthengisa komphakathiukuthengwa komphakathiihlumela komphakathiizitayela